आइएमई र वाइकोबीचको सहकार्यमा नेप्से मौन, धितोपत्र बोर्डको दोस्रो पत्र | Notebazar
काठमाडौं । ७कार्तिक, २०७८, आईतवार / Oct 24, 2021 18:48:pm
नेपाल धितापत्र बोर्डले वाइको र आइएमई समुहबिचको सहकार्यको विषयमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई दोस्रो पटक पत्र काटेको छ । बोर्डले नेप्सेसंग विस्तृत विवरण माग गर्दा कुनै जवाफ नदिएपछि पुनः पत्राचार गरेको हो ।
बोर्डले धितोपत्र बजारका तथ्याङक आइएमई समुहको पहुँचमा पुगेको सन्दर्भमा जनकारी माग्दै असोज १३ गते बुधबार नेप्सेलाई पत्राचार गर्दै विवरण माग गरेको थियो । नेप्सेले सो पत्रको जवाफ नफर्काएपछि धितोपत्र बोर्डले पुनः शुक्रबार पत्र पठाइ विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो ।
बोर्डले नेप्सेलाई पत्र पठाउदै वाइको प्रालि, वाइको सोलुसन र आइएमई समुहबिचको सहकार्यले धितोपत्र बजारमा के कस्तो जोखिम हुन सक्छ भन्दै त्यसको विवरण माग गरेको थियो । त्यस सम्बन्धमा नेप्सेले जवाफ नदिएपछि बोर्डले शुक्रबार पुनः पत्र काटेको धितोपत्र बोर्ड स्रोतले भन्यो ।
धितोपत्रको दोस्रो बजारको ठुलो खेलाडीको रुपमा रहेको आइएमई समुहले वाइको प्रालिसँग मिलेर वाइको सोलुसन प्रालि स्थापना गरेको छ । नेप्सेको अनलाइन कारोबार प्रणालीको भेण्डर कम्पनी वाइको प्रालि हो । साथै सोही कम्पनीले नेप्सेको अनलाइन कारोबार प्रणालीको मर्मत तथा सम्भारको काम गर्दे आएको छ । केही समय अघि आइएमई समुहको बहुमत शेयर हिस्सा रहने गरी वाइको प्रालिले वाइको सोलुसन स्थापना गरेर ब्रोकरले प्रयोग गर्दै आएको कारोबार सेटलमेन्ट प्रणालीको सेवा नै प्रदान गर्न थालेको जानकारी आएपछि बोर्ड देखाएको हो ।
अर्थमन्त्रालयले समेत चासो देखाएपछि बास्तविकता बुझ्नका लागि बोर्डले नेप्सेलाई पत्राचार गरेको थियो । “बोर्डले असोज १३ गतेको पत्रको जवाफ हालसम्म पनि किन नदिएको भन्दै पत्र पठाएको हो,”बोर्ड स्रोत भन्यो,“अघि पठाएको पत्रको फलो अप गर्दै पुन पत्राचार गरेको हो ।”
बोर्डले पहिलो पत्र मार्फत कुनै व्यवसायिक समुह र वाइकोको सहकार्यले धितोपत्र बजारको तथ्याङक विवरणमा जोखिम बढाउँछ वा वढाउँदैन भन्ने विषयको समेत जवाफ मागेको छ । धितोपत्र बजारमा प्रयोग भएका प्रविधिको भेण्डर तथा मर्मत सम्भार गर्ने कम्पनीलाई आइएमई समहुले प्रभावमा पारि शेयर बजारमा चलखेल गर्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ । व्यवसायिक समुहको यस्तो प्रयासलाई धितोपत्र बोर्डले गम्भिर रुपमा हेरेको समेत स्रोतले जानकारी दियो ।
आइएमई समुहका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले केही समय अघि सम्म धितोपत्र बोर्डका सञ्चालक थिए । ढकाल धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक हुँदा नै वाइकोसंग सहकार्य गर्ने र बजारमा चलखेल गर्ने योजना अनुसार काम हुँदै आएको हो । धितोपत्र बजारमा संस्थागत लगानीकर्ता मार्फत लगानी गर्दै आएको छ भने सो समुहको लगानी रहेका दजर्नौ कम्पनी धितोपत्र बजारमा सुचिकृत छन् । हाल ब्रोकरहरुले प्रयोग गर्दै आएको कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली नेप्सेको हो । नेप्सेको कारोबार व्यवस्थापन प्रणालीमा वाइको सोलुसनले आफुखुसी परिमार्जन गरेर धितोपत्र दलाल कम्पनीहरुसंग चर्को शुल्क असुली गर्दा समेत नेप्से भने मौन रहदै आएको छ ।
आइएमई र वाइकोबीच भएको सहकार्यमा धितोपत्र बोर्डको चासो, नेप्सेसँग माग्यो विवरण
नेप्सेको टीएमएसको एएमसी कसरी पुग्यो आइएमई ग्रुपको वाइको सोलुसनमा ?
वाइकोसँग मिलेर शेयर बजार कब्जा गर्ने योजनामा आइएमई ग्रुप
वाइकोले आईएमई समुहसँग सहकार्य गर्दा नेप्सेको तथ्याङ्कको गोपनियता जोखिममा
आइएमई समुहको वाइको सोलुसनलाई तत्काल भुक्तानी नगर्ने ब्रोकरहरुबीच सहमती
सेयर बजारमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ ? जानी राख्नुहोस ‘पम्प–एण्ड–डम्प’ स्क्यामबाट बच्ने उपाहरु2days ago
तीन महिनामा साढे ४१ अर्बको धितोपत्र सूचीकृत, ६ अर्बको सार्वजनिक निष्काशन 16/11/2021
ब्याजदरको एकरुपताले शेयर लगानीकर्ता उत्साहित, नेप्से साढे २% ले बढ्यो 16/11/2021
शेयर बजारमा गलत अभ्यास हाबी हुँदा नेप्सेको वृद्धि विश्वभरकै उच्च, मुकदर्शक धितोपत्र बोर्ड 15/11/2021
नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी बन्न ११ जनाले दिए आवेदन, यस्तो छ सूची 14/11/2021
पूँजी बजारमा अनलाइन कारोबारको प्रभावकारिता 13/11/2021
राधी विद्युत कम्पनीलाई तीन दिनभित्र विवरण उपलब्ध गराउन नेप्सेको निर्देशन 11/11/2021
सट्टेबाजको पछाडि कुद्दा यसरी डुब्छन् सर्वसाधारण लगानीकर्ता, सेबोन र नेप्से रमिते 09/11/2021